Izimpande Zasolwandle "Indawo Yengadi 1" - Ulwandle kanye Nentaba - I-Airbnb
Izimpande Zasolwandle "Indawo Yengadi 1" - Ulwandle kanye Nentaba
Mosteiros, Açores, i-Portugal
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Tania
I-Sea Roots "Garden Zone 1" iyindlu yokulala eyodwa enegumbi lokugezela elizimele, ikhishi, ingadi nendawo yokosa inyama.
Itholakala endaweni engaphambi kolwandle e-Mosteiros, eyintandokazi yamaholide phakathi kwezakhamizi zasesiqhingini ngenxa yesimo sezulu sayo esihle, amachibi amadwala, ukudoba, ukutshuza kanye nokushona kwelanga okumangalisayo, okungacatshangwa kuphela endaweni esentshonalanga.
Ilingana kahle nabantu ababili kanye nengane (mahhala) le yunithi ebheke eningizimu ilungele ukuphumula.
Iyunithi ayinakho ukubukwa kolwandle kusuka emafasiteleni ngoba ibheke eningizimu futhi ihlukaniswe phakathi kwengadi enezihlahla nezimbali ezimbalwa, ngakho-ke inokuthula futhi ithule kakhulu. Nokho ungawuzwa kahle umsindo wamagagasi futhi njengoba uphuma engadini uya emnyango wendawo, uzobona ngokushesha ulwandle, olungaphesheya komgwaqo, lapho kutholakala khona amachibi adumile e-Mosteiros rock.
Kukhona indawo yomlilo ekamelweni futhi izinkuni zihlinzekwa.
I-Mosteiros ingenye yezindawo ezihamba phambili esiqhingini zokuntweza, ukudoba amatshe, ukudoba ngemikhonto, ukutshuza kanye nokushushuluza nge-snorkeling, ngqo ngaphesheya komgwaqo ukusuka endaweni. Ngenhlanhla ungase ubone ngisho nemikhomo namahlengethwa edlula (sabe nalelo lungelo izikhathi ezimbalwa) . Kulabo abajabulela ukuqwala izintaba, kunemizila eminingana ephawuliwe engaqalwa iqonde ukusuka endaweni, ukuya emithonjeni yamanzi noma phezulu kwe-Sete Cidades, enye yezindawo eziphawuleka kakhulu zesiqhingi. Edolobheni kukhona ne-charter yokubuka i-whale namahlengethwa, ephinde ibe nohambo lokushona kwelanga phakathi kwe-Mosteiros ne-Ferraria, ichibi lolwandle olushisayo lapho amanzi afinyelela ngaphezu kuka-30ºC futhi etholakala endaweni eyi-8Km nje.
Inombolo yepholisi: 2042/AL
Hlola ezinye izinketho ezise- Mosteiros namaphethelo